एम्बुलेन्स सेवा १०२ (हराएको मानिस भाग ५) ~ brazesh
तर, त्यो सेवा उसले आजसम्म प्रयोग गर्न भने परेको थिएन । कसैलाई पनि सकेसम्म त्यो सेवा प्रयोग गर्न नपरेकै राम्रो हो । अत्याधुनिक उपकरणसहितका ती एम्बुलेन्समा अस्पताल पु-याउनुअघि आवश्यक उपचार गर्न तालिम दिइएका प्यारामेडिक विज्ञ पनि हुन्थे । एम्बुलेन्स सेवासँग सम्पर्क भयो ।
आकाशबाट यसरी फोनमा सम्पर्क गर्न सक्नु केही वर्षअघि भए कल्पना पनि गर्न सकिन्नथ्यो । दूरसञ्चारको विकास र प्रविधिले मानिसको जीवन धेरै सहज बनाएको छ भनेर सोच्दै उसले आफ्नो परिचय दियो र घाइते युवकको अवस्थाबारे पनि बताइदियो । १०२ को मानिसले सोध्यो, ‘कतिबेरमा पुग्नुहुन्छ ?’
उसले भन्यो, ‘बीस मिनेटको हाराहारीमा हामी ल्यान्ड गर्नेछौँ ।’उताबाट एम्बुलेन्स सेवाको ‘डिस्प्याचर’ले गम्भीर भएर भन्यो, ‘हाम्रा केही एम्बुलेन्समा भेन्टिलेटर पनि छन् । म सकेसम्म तीमध्ये एउटालाई हेलिप्याडतिर पठाइदिन्छु ।’ १०२ नम्बरमा सम्पर्क गर्न सकिने एम्बुलेन्सहरूमा जिपिएस पनि जडान गरिएका हुनाले कुन वाहन कहाँ छ भनेर पनि तत्काल निक्र्योल गर्न सकिन्थ्यो ।
ऊ भेन्टिलेटर भएको एम्बुलेन्स खोज्न मनिटरमा आँखा घुमाउन थाल्यो । सिनामंगलको अस्पतालमा एउटा बिरामी पु¥याएर आफ्नो स्टेसनतिर फर्किरहेको एम्बुलेन्स भर्खर एयरपोर्ट नाघेर तिलगंगानेर पुगेको रहेछ । विमानस्थलबाट त्योभन्दा नजिक अरू कुनै बाहन थिएन । उसले त्यस एम्बुलेन्सका ‘पाइलट’सँग सम्पर्क गर्ने उपक्रम ग-यो ।
हो, उनीहरू एम्बुलेन्सको चालकलाई ‘ड्राइभर’ हैन, ‘पाइलट’ भन्ने गर्थे । उता आकाशमा भएको हेलिकोप्टरको पाइलटले फेरि आफ्नो मित्र रञ्जितलाई सम्पर्क गर्न थाल्यो । रञ्जित कुनै उत्पादनका लागि विज्ञापनको आइडियामा आफ्नो टिमसँग माथापच्ची गरिरहेको थियो । अरूको फोन भए पछि उठाउँथ्यो होला, तर पाइलट उसको मिल्ने साथी थियो । तीन घन्टीमा रञ्जितले फोन उठायो र चहकिलो स्वरमा भन्यो, ‘ओहो ! पाइलट साब, लङ टाइम ।’
पाइलट हतारिँदै बोल्न थाल्यो, ‘इमर्जेन्सी । क्रिटिकल अवस्थामा भएको एउटा बिरामी लिएर ल्यान्ड गर्दै छु । मैले १०२ मा जानकारी गराइसकेको छु । एम्बुलेन्स पठाइदिन्छु भनेका छन् । जस्ट इन केस, तिमीलाई पनि इन्फर्म गरेको ।’उसको स्वरबाटै रञ्जितले पनि अवस्थाको गम्भीरता बुझिहाल्यो । उसले भन्यो, ‘त्यसो भए त पुगिहाल्छ । डन्ट वरी । तैपनि म एकपटक बुझ्छु ।’
एम्बुलेन्सको पाइलटले खबर पाउनासाथ साइरन र बत्ती अन ग-यो, अनि आफ्नो दक्षताको प्रदर्शन गर्दै फनक्क युटर्न मा-यो । उसले आफ्नो पूरै खुट्टाको दबाब एक्सिलरेटरमा दियो । एम्बुलेन्स ताँदोबाट छुटेको तीरजसरी हुत्तिएर एयरपोर्टतिर हुइँकियो । उता रञ्जितले पनि डिस्प्याचरसँग सम्पर्क गरिसेकेको थियो । डिस्प्याचरले एम्बुलेन्स बाटोमा भएको र हेलिकोप्टर ल्यान्ड हुनुअघि पुग्ने जानकारी दिँदै थियो ।
नभन्दै हेलिकोप्टरले भुइँ छुँदा एम्बुलेन्स तयार थियो । त्यसमा भएका तीनैजना इएमटी प्यारामेडिक सतर्कताका साथ स्कुप स्ट्रेचर बोकेर हेलिकोप्टरतिर लम्किए । नामैले बताएअनुसार यो किसिमको स्ट्रेचरमा विशेषगरी ढाडमा चोटपटक लागेको बिरामीलाई नसमाती, नहल्लाई चढाउन सकिन्छ । स्ट्रेचरको दुइटा फक्ल्याँटो परेको भागलाई बिरामीको शरीरको दायाँबायाँ दुईतिर मुनिबाट ख्वप्ल्याक्क पारेर छिराई ट्याक्क जोड्न सकिन्छ ।
अनि सतर्कताका साथ उसलाई लैजान सकिन्छ । डिस्प्याचरले एम्बुलेन्सलाई खबर गर्दा नै त्यहाँको अवस्थाको गम्भीरताबारे जानकारी दिइसकेको थियो । इएमटी कर्मचारीले अचेत युवकलाई दक्षताका साथ स्कुप स्ट्रेचरमा हाले र एम्बुलेन्सतिर दौडाए । एम्बुलेन्स त्यस युवकलाई लिएर फेरि नजिकैको अस्पतालतिर कुद्यो । एयरपोर्टको ढोकाबाट बाहिर मूल सडकमा निस्कने ठाउँमा निकै धेरै ट्राफिक थियो । पाइलटले दुवैतिर हे-यो । सिनामंगलतिर जाने बाटोमा त झनै धेरै लामो जाम थियो ।
त्यही वेला उसको फोन बज्यो । उताबाट रञ्जित बोल्दै थियो, ‘सिनामंगल चोकमा माइक्रोले बाइकलाई ठक्कर दिएकाले अवस्था ठीक छैन । गौशाला रातोपुल हुँदै जानुपर्ला । म ट्राफिक प्रहरीसँग समन्वयमा छु । कता छिटो पु-याउन सकिन्छ फेरि भनुँला ।’
‘हस् ।’ संक्षिप्त उत्तर दिएर पाइलटले दाहिने मोड्यो । उसको ठ्याक्कै अगाडि भएको एउटा गाडी सुस्त गतिमा चलिरहेको थियो । त्यसको अगाडि लमतन्न बाटो खाली थियो । त्यो गाडीले बाटो अड्काइरहेको थियो । त्यसका चालकले साइरनको आवाज सुनेको थिएन । सुनोस् पनि कसरी, ऊ त झ्याल डम्म पारेर एसी चलाएर ठूलो स्वरमा गीत बजाइरहेको थियो । जिम मरिसन गाइरहेको थियो,
‘देयर इज अ किलर अन द रोड…’
एम्बुलेन्सको पाइलट मनमनै सोच्दै थियो, ‘पहिले त एम्बुलेन्सका लागि मान्छेहरू बाटो बनाइदिन्थे । आजकल त साइड पनि छाड्दैनन् । यो सहरका मानिसमा मानवता भन्ने कुरा पनि किन यसरी मर्दै गएको होला ?’
गोल्फ कोर्स सकिने ठाउँनिर उसले बल्लबल्ल त्यो संगीतप्रेमी चालकलाई उछिन्यो र गति बढायो । गौशाला पुग्ने वेला फेरि त्यत्ति नै लामो जाममा ऊ फस्यो । राष्ट्रपतिको कुनै कार्यक्रमका लागि त्यताबाट ‘सवारी’ चल्न लागेको रहेछ । अर्को साइड पनि पूरै सवारीसाधनले भरिएको थियो । मोटरसाइकल र स्कुटरहरू दाहिने, देब्रे, आफ्नो र अरूको साइडमा कुनै पक्षपात नगरी कुनाकुनामा कोच्चिन भ्याइसकेका थिए ।
हलचल गर्न नसक्ने गरी त्यो अव्यस्थित जाममा फसेको एम्बुलेन्स प्रतिवादमा रोएको जसरी प्याँप्याँ गरिरह्यो । मानौँ त्यो निर्जीव वाहन भनिरहेछ, ‘ए सजीव मानव हो । म मेरो गर्भमा एउटा बिरामी मानिस बोकिरहेको छु । केही मिनेट तलमाथि भएर तिमी स्वस्थ्य मानिसलाई फरक पर्दैन । तर उसको सास जान सक्छ । लौ न बाटो छोड ।’
तर, उसको साइरनको भाषा सायद आजकलका मानिसहरूले बुझ्न छाडिसेका थिए । एम्बुलेन्समा भएका इएमटी कर्मचारीमध्ये एकको आँखा त्यहाँ जोडिएको मनिटरमा प-यो । त्यसले अचेत युवकको हृदयको गति देखाइरहेको थियो । ऊ आत्तियो र भन्यो, ‘छाँटकाँट राम्रो छैन । इट्स गोइङ डाउन ।’ अरू दुईजना पनि त्यतै लागे । अर्कोले भन्यो, ‘हे भगवान् ! यो जाम कतिवेला खुल्ने हो ?’
पाइलट असहाय भावले कतैबाट एम्बुलेन्सलाई छिराउन सकिन्छ कि भनेर हेर्न थाल्यो । यता प्यारामेडिकहरू आत्तिन थाले । किनभने युवकको हृदयको गति झनै कमकम हुन थालिसकेको थियो । सवारी चलिसकेको थिएन । जाम खुल्ने अझै कुनै संकेत नै थिएन ।
झन् एम्बुलेन्सकै अगाडिको देब्रेतिरबाट कोच्चिन गएको मोटरसाइकलको लेगगार्डले एउटा चिल्लो गाडीको छेउमा कोतरेको हुनाले दुवै वाहनचालक ओर्लेर एकअर्कालाई तथानाम गालीगलोज गर्दै बाझ्न थालिसकेका थिए । अब उनीहरूले एकअर्कासँग मुक्कामुक्की गर्न मात्र बाँकी थियो ।
यता मनिटरले युवकको हृदयको गति बन्द भएको देखायो । एकजना प्यारामेडिकले हतारहतार स्टेथेस्कोप कानमा लगाएर युवकको छातीमा टाँस्यो । ‘छैन ।’ उसले सानो स्वरमा भन्यो । ‘सिट्, अब के गर्ने ?’ अर्कोले सोध्यो । ‘डिफिब्रिलेटर ?’ पहिलोले निर्णय ग-यो । मनिटर र स्टेथेस्कोपले फेला नपारे पनि मानिसको मुटुले पूरै काम गर्न नछाडेको हुन सक्छ ।
त्यस्तो वेलामा उसको छातीमा दुइटा प्याड लगाएर करेन्ट हान्ने उपाय हुन्छ । त्यही उपकरणलाई डिफिब्रिरिलेटर भनिन्छ । मानिस र अवस्था हेरेर कति करेन्ट लगाउने भन्ने कुरा फरक पर्छ । परम्परागत उपकरणमा कति करेन्ट प्रवाह गर्ने भन्ने ठ्याक्कै थाहा नहुने हुनाले चिकित्सकले थोरैबाट बिस्तारै मात्रा बढाउँदै लैजानुपर्ने हुन्थ्यो ।
तर, १०२ को एम्बुलेन्समा अत्याधुनिक र स्वचालित डिफिब्रिरिलेटर जडान भएको थियो । त्यसैले प्याडलाई बिरामीको छातीमा जोड्नासाथ अवस्थाअनुसार कति अन्तरालमा कतिपटक झट्का दिने भन्ने त्यसले आफैँ पत्ता लगाउँथ्यो ।
यसो हुँदा सामान्य जानकारी भएको मानिसले पनि यसको प्रयोग गरेर कसैको ज्यान जोगाउन सक्थ्यो । १०२का प्यारामेडिक त झन् आधारभूत तालिम भएकाहरू नै भए । उनीहरूले तेजीका साथ हृदयगति बन्द भएको युवकको छातीमा उपकरण जडान गरे । लामो सास फेरेर पशुपतिनाथलाई सम्झँदै एकजनाले डिफिब्रिरिलेटरको स्विच अन गरिदियो ।
वरिष्ठ शल्य चिकित्सक डाक्टर सरोज धिताल आजकल पहिलेजति धेरै शल्यक्रिया गर्दैनथ्योे । एकदमै जटिल अवस्थाका बिरामीको शल्यक्रियामा मात्र संलग्न हुन्थ्यो । उसको अस्पतालमा उसले आफैँले बनाएको समूहमा एक से एक कुशल शल्यचिकित्सक थिए । त्यस दिन पनि उसले एउटा त्यस्तै जटिल र लामो शल्यक्रिया सफलतापूर्वक सकाएको थियो ।
केही बेर विश्राम गरेपछि सबै वार्डहरूको निरीक्षण गरेर ऊ घर जान तल ओर्लेको थियो । आफ्नो गाडीतिर जानै लाग्दा अलि परबाट आइरहेको एउटा एम्बुलेन्सको आवाज उसको कानमा प-यो । ऊ सतर्क भएर रोकियो । लामो सेवाको अनुभवले होला, उसको छैटौँ इन्द्रियले उसलाई कुनै गम्भीर बिरामी ल्याइँदै छ भन्ने संकेत दियो । ऊ फरक्क फर्कियो र लबीमा पुग्यो । उसले ड्युटीमा भएको कर्मचारीलाई अलर्ट गराउन थाल्यो ।
एम्बुलेन्सको आवाज क्रमशः ठूलो हुँदै नजिक–नजिक आइरहेको थियो । नभन्दै त्यसको केही बेरमै एम्बुलेन्स सेवा १०२ को वाहन अस्पतालको हातामा छि-यो । अस्पतालका कर्मचारी तयार नै थिए । एम्बुलेन्सबाट अस्पतालको स्ट्रेचरमा सारेर युवकलाई भित्रतिर लैजाँदालैजाँदै प्यारामेडिकले डाक्टर धिताललाई जानकारी गरायो, ‘बीचमा हामीले डिफिब्रिरिलेटर चलाएपछि हि केम ब्याक ।’
डाक्टर धितालले आफ्ना कर्मचारीलाई निर्देश दियो, ‘ओटीमा लैजानुस्, छिटो । मलाई लाग्छ, इन्टरनल हेमोरेज छ । अपे्रसनको लागि टिमलाई तयार गर्नुस् । म ज्वाइन गर्छु ।’ ‘डाक्टरसाब…, यो त पुलिस केस होइन र ?’ ‘हो । पुलिसमा पनि खबरचाहिँ गर्नुस् । तर, उसको उपचार म सुरु गर्छु । कुर्न सकिँदैन । हाम्रो सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता बिरामीलाई बचाउन खोज्नु हो । बाँकी कुरा हुँदै गर्छ ।’
भर्खर निकै लामो र जटिल शल्यक्रिया गरेर निस्केको डाक्टर धिताल फेरि अर्को त्यस्तै शल्यक्रियाका लागि आफूलाई तयार पार्न थाल्यो । ओटीतिर जानुअघि उसले घरमा फोन ग-यो । र, भन्यो, ‘सुलो…, एउटा इमर्जेन्सी आयो । मेरो घर आउने ठेगान नहुने भयो है ?’